Cofound.it စျေး - အွန်လိုင်း CFI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Cofound.it (CFI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Cofound.it (CFI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Cofound.it ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $5 214 430.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Cofound.it တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Cofound.it များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Cofound.itCFI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0414Cofound.itCFI သို့ ယူရိုEUR€0.0353Cofound.itCFI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0317Cofound.itCFI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.038Cofound.itCFI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.373Cofound.itCFI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.263Cofound.itCFI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.923Cofound.itCFI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.155Cofound.itCFI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0551Cofound.itCFI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0579Cofound.itCFI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.929Cofound.itCFI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.321Cofound.itCFI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.223Cofound.itCFI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.09Cofound.itCFI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.97Cofound.itCFI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0568Cofound.itCFI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.063Cofound.itCFI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.29Cofound.itCFI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.287Cofound.itCFI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.41Cofound.itCFI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩49.05Cofound.itCFI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦15.74Cofound.itCFI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.03Cofound.itCFI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.14
Cofound.itCFI သို့ BitcoinBTC0.000004 Cofound.itCFI သို့ EthereumETH0.000109 Cofound.itCFI သို့ LitecoinLTC0.000765 Cofound.itCFI သို့ DigitalCashDASH0.000475 Cofound.itCFI သို့ MoneroXMR0.000477 Cofound.itCFI သို့ NxtNXT3.34 Cofound.itCFI သို့ Ethereum ClassicETC0.00609 Cofound.itCFI သို့ DogecoinDOGE12.41 Cofound.itCFI သို့ ZCashZEC0.000525 Cofound.itCFI သို့ BitsharesBTS1.58 Cofound.itCFI သို့ DigiByteDGB1.37 Cofound.itCFI သို့ RippleXRP0.147 Cofound.itCFI သို့ BitcoinDarkBTCD0.00145 Cofound.itCFI သို့ PeerCoinPPC0.144 Cofound.itCFI သို့ CraigsCoinCRAIG19.16 Cofound.itCFI သို့ BitstakeXBS1.79 Cofound.itCFI သို့ PayCoinXPY0.734 Cofound.itCFI သို့ ProsperCoinPRC5.28 Cofound.itCFI သို့ YbCoinYBC0.00002 Cofound.itCFI သို့ DarkKushDANK13.48 Cofound.itCFI သို့ GiveCoinGIVE91.01 Cofound.itCFI သို့ KoboCoinKOBO9.58 Cofound.itCFI သို့ DarkTokenDT0.0381 Cofound.itCFI သို့ CETUS CoinCETI121.34
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 01:35:01 +0000.